Famonoana mpivarotra tao Behenjy Tratra izy 16 lahy sy ireo dahalo avy any Antsahadinta
Jiolahy avy eny amin’ny manodidina ihany no nampakatra dahalo avy any Antsahadinta nitifitra sy nandoro ireo mpivarotra teny Behenjy, Distrika’Ambatolampy.
Ny ampitson’ny vono olona dia efa nisy tratra, raha ny tafa manokana tamin’ny mpiandraikitra ny vondron-tobim-paritra Ambatolampy. Miandry azy 16 mirahalahy ny fonjaben'i Tsiafahy. Izay no didy navoakan'ny Fitsarana Ambatolampy rehefa vita ny famotorana azy ireo. 16 mirahalahy mianaka no voarohirohy ary voasambotry ny zandary avy ao amin'ny Kompania Ambatolampy sy ny vondron-tobim-pileovana Vakinankaratra. Izy 16 lahy ireo no anisan'ny nandray anjara mivantana na ankolaka nandritra ny raharaha halatra sy tifitra ary vono olona miaro fandoroana trano ny alin'ny Sabotsy 20 teo. Andian-jiolahy miisa 8, mirongo fiadiana, no nanafika tanàna roa mielanelana 7 km. Antanetilava sy Soamanarivo, samy fokontany Ambohidrano kaominina Behenjy. Tonga tao anatin'ny fotoana fohy ny zandary efadahy avy ao amin'ny PA Behenjy, rehefa nahazo antso in-droa misesy. Tamin'ny 10ora sy sasany alina izay antso 40 minitra taorian'ny fanafihana voalohany sy tamin'ny 12 ora sy sasany alina izay antso 15 taorian'ny fanafihana faharoa.
Namoy ny ainy tamin'io fanafihana io moa ny raim-pianakaviana mpivarotra ao Antanetilava, voan'ny tifitry ny basin'ireo malaso. Nifindra tao Soamanarivo indray ireo malaso ka nodorany ny trano fonenan'ny renim-pianakaviana iray mpivarotra rehefa avy norobain'izy ireo. Namoy ny ainy vokatry ny hasemporana kosa io vehivavy io sy ny zanany telo. Mbola misy namany karohina koa ireto jiolahy ireto.